भारतमा अनियन्त्रित भाइरसको ‘घातक’ परिणाम भोग्दै छिमेकी राष्ट्र – Health Post Nepal
भारतमा अनियन्त्रित भाइरसको ‘घातक’ परिणाम भोग्दै छिमेकी राष्ट्र
२०७८ वैशाख १६ गते १२:२३
भारतले दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमणको घातक परिणाम भोगिरहेका बेला छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि त्यसको उछाल देखिएको छ।
सबैजसो छिमेकीले सिमा नाकाहरूमा कडाइ गरेका छन् भने यात्रामा प्रतिवन्ध लगाएका छन्। नेपालले सीमानमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ट्रान्जिट बन्द गरेको छ।
भारतमा हरेक तिन दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या दश लाख नाघिरहेको छ। दैनिक तीन हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइरहेको छ। बुधबारमात्रै भारतमा ३ हजार २ सय ९३ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। दैनिक तीन लाखभन्दा धेरै मानिस संक्रमित भइरहेका छन्।
त्यहाँको संक्रमण यति बढिरहेको छ कि पूरै देशको स्वास्थ्य प्रणालीले अहिले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालमा ठाउँ छैन।
रामीहरूको घरमै मृत्यु भइरहेको छ। एम्मुलेन्समै बिरामीले प्राण त्यागिरहेका छन्। अस्पतालका आँगनमा बिरामी अन्तिम सास लिइरहेका छन्।
अस्पतालले निकै गम्भिर खालका बिरामीलाई मात्रै बल्लतल्ल बेड दिन सकेको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन छैन र बिरामीका आफन्तले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
गुजरातको सुरत सहरमा अस्पतालहरूले दैनिक १ सय ५० देखि २ सय बिरामीहरू घरै फर्काउने गरेको छ। किनकि अब अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ नै छैन।
‘अब हाम्रा सहरका अस्पतालहरू सबै भरिएका छन्। अक्सिजनका सिलिन्डरहरू सकिएका छन्। अब हामी वरिपरीका बिरामीलाई समेत राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’ भारतीय मेडिकल एशोशिएशनका गुजरातका अध्यक्ष डा. हिराल शाहले भने ‘अक्सिजनको आपूर्ति कहिले हुन्छ थाहा छैन। यहाँ हरेक दिन हरेक क्षण के हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अवस्था एकदमै अनिश्चित छ।’
पूरै भारतमा अहिले संक्रमणको रफ्तार एकदमै बढिरहेको छ। त्यसको असर छिमेकी राष्ट्रहरूले समेत भोगिरहेका छन्। गत मार्चमा मात्रै भारतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फेला परेको थियो। त्यो सुरुमा बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड तथा इटलीलगायतका देशमा फैलिएको थियो।
अहिले पनि बैज्ञानिकहरूले त्यो नयाँ प्रजातिको भाइरसको गुण र विशेषताबारेमा केही पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। भारतकै बैज्ञानिकहरू पनि त्यो नयाँ प्रजातिको भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङमा लागिरहेका छन्। अहिलेसम् त्यसको कुनै पनि परिणामहरू बाहिर आएका छैनन्। यसको मतलव यो भाइरसको संक्रमणको बारेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन, यो कतिसम्म घातक छ भनेर। तर त्यसका घातक परिणाम भने अहिले भारत र छिमेकी राष्ट्रिले भोगिरहेका छन्।
भारतमा जसरी यो प्रजातिको भाइरस फैलिरहेको छ र मानिसको ज्यान लिइरहेको छ त्यसले छिमेकमा मात्रै होइन विश्वका सारा देशहरूमा जोखिम सिर्जना गरेको छ। त्यसैले भारतसँग धेरैले उडानहरू बन्द गरेका छन् भने यात्रामा प्रतिवन्ध लगाएका छन्।
केही दिनअघिमात्रै इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले देशवासीका नाममा चेतावनी दिँदै भनेका थिए ‘भारतीय भेरिअन्टको भाइरस यहाँ पनि आउनसक्छ र हामीलाई धेरै ठूलो समस्या निम्त्याउनसक्छ।’
भारतसँग सिमान जोडिएका नेपाल, पाकिस्तान, म्यानमार, भुटान तथा बंगलादेशजस्ता देशहरूमा त्यसको जोखिम अझ धेरै छ। नेपालले त त्यो भोगिरहेको छ पनि।
धेरैजसो खुला सिमाना भएका कारण यहाँ आउने जानेहरूको लर्को उत्तिकै लागिरहन्छ। मुख्य नाका बन्द भएपनि चोरबाटो भएर आउनेजानेहरू उत्तिकै हुन्छन।
आफ्नो देशमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अधिकार राष्ट्रले सिमानामा बन्देज लगाएका छन्। नेपालमा पनि भारतीय भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ। यो निकै घातक पनि छ र नेपालमा दिनरात दुईदेखि चारगुणासम्म संक्रमण बढिरहेको छ। नेपालमा मृत्यु दर पनि अहिले बढिरहेको छ। नेपाल सिमित स्रोतका बावजुद नयाँ प्रजातिको भाइरसँग जुधिरहेको छ।
विज्ञहरूले भारतको भन्दा पनि भयावह स्थिति आउनेतर्फ संकेत गरिरहेका छन् र त्यसका लागि तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
पाकिस्तान, नेपाल र बंगलादेश
उत्तरी भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालमा पछिल्ला दिनमा संक्रमणको गति निकै आकाशिएको छ। गत फेब्रुअरी सम्म १०० भन्दा मुनि रहेको संक्रमित संख्या अहिले दिनमै ५ हजार नजिक पुग्न थालेको छ। मध्य अप्रिलतिर भारतीय भेरिअन्टको भाइरस पुष्टि भएसँग यो निकै तीव्रगतिमा फैलिरहेको छ।
खासगरी राजधानी काठमाडौं र भारतसँग सिमान जोडिएका लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, दाङ, बुटवल अनि प्रदेश २मा अहिले संक्रमण निकै घातक भइरहेको छ।
रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार यो संक्रमण फैलिनुका केही कारण भारतबाट फर्किएका नेपालीमा देखिएको संक्रमण हो। सुरुमा यहाँ बेलायत र भारतबाट फर्किएकाहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी भीडभाडयुक्त्त खुला बजार तथा बिना स्वास्थ्य मापदण्ड आयोजना गरिएका सभासम्मेलन र जात्रा पर्वहरूले यो संक्रमणलाई अझ धेरै मलजल गरे।
यो बढ्दो संक्रमणको चेल तोड्नका लागि सरकारले राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ‘हटस्पट’हरूमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। राजधानी काठमाडौंमा १५ दिनका लागि निषेधज्ञा जारी गरिएको छ।
तर यसअघि नै नेपालका धेरैजसो अस्पतालहरू भरिइसकेका छन्। भारतीय सिमा जोडिएको नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा अहिले बेड छैन। क्षमताभन्दा धेरै बिरामी राखेर पनि उपचार गराइरहेको यो अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको व्यापक कमी भइरहेको छ।
‘अब हाम्रा सबै अस्पतालहरू भरिइसकेका छन्। यो कोरोना भाइरसको नयाँ छालको परिणाम हो’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डा. शेरबहादुर पुनले भने।
बंगलादेश भारतको पूर्वी सिमानमा छ। यहाँ पनि गत मार्चदेखि संक्रमण तीव्र हुन थालेको थियो। अहिले यहाँ पुरानै प्रजातिको भाइरस फेरि सक्रिय भएको भनिएको छ। तर पनि बंगलादेशले कडा लकडाउन गरेको छ। हवाइ अनि सडक यात्रामा समेत कडा नियन्त्रण गरिरहेको छ।
गत सोमबार बंगलादेशले भारतसँगका आफ्ना सबै नाकाहरू आगामी दुई साताका लागि बन्द गरेको छ। उसले भारतसँगको सामान आपूर्ति पनि अहिलेका लागि रोकेको छ।
पश्चिमी भारतसँग जोडिएको पाकिस्तानमा पनि अक्सिजनको अभाव देखिन थालेको छ। यहाँ पनि संक्रमणको गति मार्चदेखि नै बढ्न थालेको हो। र भारतमा संक्रमणले गति लिएसँग यहाँ पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
पाकिस्तानमा बुधबार मात्रै २०१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एकैदिन भएको अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा धेरै मृत्यु संख्या हो। ८८ हजार सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले पाकिस्तानमा फैलिरहेको भाइरस भारतीय भेरिअन्टको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छैन। पाकिस्तानले भारतसँगको सबै यात्रामा प्रतिवन्ध लगाएको छ।
पाकिस्तानमा रहेको ९० प्रतिशत अक्सिन प्रयोगमा आइसकेको र अहिले निकै ‘आपतकालीन’ अवस्थामा रहेको सरकारले निश्कर्ष निकालेको छ।
भारतमा काेराेना संक्रमित